Storelọ Ahịa Apple na Grand Central na New York na-emechi n'ihi nkwụsị ọkụ | Esi m mac
Storelọ ahịa Apple dị na Grand Central na New York na-emechi n'ihi nkwụsị ọkụ
Anyị malitere n'ụtụtụ site na akụkọ na-emetụta ndị ọrụ ụnyaahụ bụ ndị nọ na Central Central Station na New York na ndị na-aga ịhọpụta na Genius Bar na ụzọ Apple Store ma ọ bụ naanị iji chọgharịa ma ọ bụ zụta ihe na ụlọ ahịa ahụ. Ana m ekwu kpọmkwem maka ọkụ eletrik nke mere ka ọnụ ụzọ ụlọ ahịa n'ozuzu n'ime ọdụ ahụ mechie na-enweghị inyekwu ozi gbasara imeghe mmeghe.
Onye ọrụ gọọmentị ahụ kpatara nke a na-eme ka ọpụpụ a na-ahụkarị na ọdụ ahụ na nke ahụ metụtara Apple Store dị n'ime amabeghị, ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na ọ bụ ọkpọkọ mmiri mebiri na ọdụ ahụ, dị ka onye ọrụ nke Metropolitan gosipụtara Authoritygbọ njem Authority, ebe ọ bụ na ẹdụk mmiri ọ nwere ike imetụta onye na-agbanwe ọkụ.
A na-ekwu na ọpụpụ ike ahụ bidoro n'elekere 9:30 nke ụtụtụ wee metụta ọkwa dị ala nke ọnụ, na nkwụsịtụ na ọkwa dị elu. Malite n ’elekere iri na otu nke ụtụtụ, eweghachiri ike na ebe a na-anabata ndị ọbịa, ọ bụ ezie na ndị isi Grand Central kwuru, ụlọ ahịa ahụ ka mechiri.
N'aka nke ọzọ, ọpụpụ ọkụ emetụtaghị usoro usoro ụgbọ oloko, ọ bụ ezie na ụfọdụ igwe tiketi ha anọghị n'usoroAgbanyeghị iji belata ọdịda a, ndị njem nọ n'ụgbọ oloko ahụ nwere ike ịzụta tiketi na-enweghị ụdị ntaramahụhụ ọ bụla ebe nsogbu ike dị na-edozi.
N’agbanyeghi na odi ka odi nkpa, aghaghi iburu n’uche na kariri Ndi mmadu 700.000 gafere ebe ahu kwa ubochi na pasent nke ndị ahụ bụ ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa nke Apple, ya mere ụlọ ọrụ ahụ na-efu maka oge ọ bụla na ụlọ ahịa ahụ ka ga-emechi ma ọ bụrụ na anyị ewere ya na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa ọ bụghị naanị na New York , ma ọ bụrụ na ọ bụghị Worldwide.
O doro anya, na New York City nyere Apple n'oge na-adịbeghị anya maka iweghachi ụlọ ndị ahọpụtara ịchekwa ụlọ ahịa Apple na nke ahụ i nwere ike ịgụ na ntinye a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Storelọ ahịa Apple dị na Grand Central na New York na-emechi n'ihi nkwụsị ọkụ
Apple Music na Sonos onye otu na-emepụta azụmahịa TV
MiniStats na-atụgharị Apple Watch gị ka ọ bụrụ ebe data dị na iPhone gị